musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies Vanyori venhau veUS Jake Tapper Diki Yemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Jake Tapper Biography Nyaya.
Yedu Jake Tapper Biography inoputsa Yake Nyaya Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga / Makore, Vabereki, Hupenyu hwemhuri, Upenyu Hupenyu (mudzimai, vana), Mararamiro, uye Hupenyu hwePamoyo. Zvakare, iko kuongorora kwakazara kwehupenyu Hwake Hupenyu kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava nemukurumbira semutori venhau weAmerica.
Kugara munyika umo zuva rega rega rizere nemishumo inonakidza kubva kune yekushambadzira indasitiri, ungadai wakambowana Jake Tapper paTV. Ehe, isu tese tinoziva kuti ndiye mumwe wevanoremekedzwa kwazvo Vatori venhau veAmerica muPolitics.
Nekudaro, vanhu vashoma chete ndivo vanoziva nezvekujairwa kwakaitwa Jake muhupenyu vachiri kukwira manera emukurumbira. MuUdiki Biography, takaisa pamwe Inonakidza Hupenyu Nyaya yemutori wedu weAmerica anozivikanwa uye munyori kuti tinokusiya iwe uchiratidzwa. Pasina kunonoka, ngatitangei neChinyorwa Chake Chemwana.
Jake Tapper Nyaya Yevechidiki:
Kutanga kuenda, Jake Tapper pakutanga akapiwa zita racho Jacob Paul Tapper kubva pakuzvarwa. Iye akazvarwa musi wegumi nemaviri waKurume 12 kuNew York City kuna amai vake, Helen Anne Palmatier Tapper, uye baba vake, Theodore S. Tapper. Iye ndiye wedangwe wevana vaviri akazvarwa paNyubvu pakati pevabereki vake.
Nehurombo, hwaTapper hweMwana hwakafukidzwa mumamiriro ekuvhiringidzika. Paaive mukomana mudiki, akapupurira kunyora kwaakaita vabereki vake chikumbiro chekurambana ndokuenda kwavo vakaparadzana. Varombo Tapper vaisakwanisa kujairana nehupenyu hutsva hwakazoitika mushure mekupatsanurwa kwevabereki vake. Nekuda kweizvozvo, akachinja kugara nevabereki vake, zvinova zvinoshungurudza mwana pazera rake.
Jake Tapper Mhuri Dzinobva:
Dzinza remadzitateguru edu eAmerican mtori venhau uye munyori anoratidza kuti ndiye wedzinza revaAshkenazi. Nekudaro, yake Yemhuri Yakatangira sekudaro naamai vake inosanganisira Ulster-Scots / Northern Ireland, Scottish, Chirungu, uye Germany Mhuri Roots. Naizvozvo, zviri nyore kutaura kuti Tapper ine marudzi mazhinji emarudzi.
Jake Tapper Mhuri Yemashure:
Idi rekuti vabereki vaTapper vese vaive nyanzvi dzekurapa vaigona nyore kuwana izvo zvaaida zvinofanidza ramangwana rakajeka kwaari. Nechivimbo, mukomana mudiki akadzikisira basa rake ramangwana kuita katuni kana kuita firimu.
Zvisineyi, kana achigona kuzadzisa kurota kwake, aifanira kubatirira pane kuvimba kwake achiri kukura. Sezvo mhuri yake yaive yechiJudha, Tapper akarererwa zvichienderana nemararamiro echiJuda kusarambana kwevabereki vake.
Jake Tapper Kurarama Kwepakutanga; Iyo Yekusaziva Yekugadzira Mode, Iyo nzira yekuTepfenyuro:
Matambudziko muhupenyu haambofa akaganhurirwa, anogona kukupwanya kana kukugadzira. Kusiyana nevamwe vana vazhinji vakaputswa nedambudziko rekurambana, Tapper haana kubvumira mamiriro ezvinhu kuti amuremedze. Asi, akakurumidza kujaira mararamiro matsva anoitika paanokura.
Kukura muPhiladelphia, Tapper akatanga kuisa pfungwa pazvinhu zvakanaka uye zvisiri izvo, nekudaro achive nechokwadi chekuti anoona chero mamiriro ezvinhu kubva pamaonero ese ari maviri. Zvimwe, kurerwa kwake kwaive kuchimusvitsa kunzira yehutori.
Nekusaziva, nhungamiro dzake dzekutarisa nyaya kubva pamaonero maviri dzaive dzichimuumba kuva mutori wenhau nemunyori zvaari nhasi. Nekudaro, iye mukomana mudiki aingogwadamira kuti abudirire semuvezi wekatuni.
Jake Tapper Dzidzo: Kutanga kweYake Press uye Zvematongerwo enyika Basa:
Mutori venhau vekuAmerica akashandisa zvakanyanya nguva yake muChikoro Chikuru kuzvivakira choto. Paaidzidza paAkiba Hebrew Academy muMerion, Pennsylvania, Tapper akatanga kuita basa rekunamata vadzidzi vake pamwe nekudhirowa katuni dzinoshamisa.
Kuzvarwa mumhuri isina kubatana nevezvematongerwo enyika hakuna kutadzisa Tapper kubva mukufungidzira mabasa ekutungamira muchikoro. Akashanda semutungamiriri wekirasi yake pamwe nemupepeti wepepa rake wechikoro.
Jake Tapper Yekutanga Yekuita Hupenyu:
Mushure mekupedza chikoro chesekondari, Tapper akanyoresa kuDartmouth College kwaakadzidza nhoroondo uye zvidzidzo zvekuona. Wow! unofanirwa kunge uchinetseka kuti sei murume wechidiki anovimbisa akasarudza kubva pakurota kwake kwekugadzira mafirimu kudzidza nhoroondo. Zvisineyi, chokwadi chinogona kunge chisiri kutipa isu mukana wekusarudza kwedu kuzadzisa zviroto zvedu. Tinoda kubudirira.
Tapper akanzwisisa chaihwo kwekupedzisira kuzvivakira munzira chero yaaigona uye nekukurumidza kunyoresa kudzidza mafirimu kuYunivhesiti yeSouthern California. Nekudaro, chirongwa ichi chakave chakaoma kupfuura chaaifungira. Pane chino chinyorwa, Tapper akasiya chirongwa ichi mushure mekupedza semesita imwe chete.
Mwedzi mishoma chete abva kuYunivhesiti, Tapper akabatanidzwa mune zvematongerwo enyika. Akashanda seMushandirapamwe weCampaign Press of Marjorie Margolies-Mezvinsky mumiriri weDemocratic DRM.
Jake Tapper Road kune Mukurumbira Nyaya:
Pasina nguva iri kure, Tapper akasimudzira chikwereti chake nekushanda semutauriri weHiggun Control Inc. kwemakore matatu. Akashandisawo mimwe mikana yakawanda mukuisa hunyanzvi hwake hwezvematongerwo enyika uye hwekuveza kushandisa.
Iwe unoziva here?… The New Republic. Nekudaro, paakanyorera basa rekuita freelancer kuThe New Republic, chikumbiro chake chakazove chisina kubudirira.
Jake Tapper Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Pasina imwe pfungwa yekuodzwa mwoyo, Tapper akanyora zvimwe zvinyorwa zvakasununguka kune mamwe akawanda mabhuku. Pashure pacho, akatanga basa rake rounyanzvi hwenhau yakazara mugore ra1999.
Jake Tapper akashanda semunyoreri wevazhinji News Agency. Dzimwe dzenhepfenyuro dzaakashandira dzinosanganisira; Salon.com, CNN yenhau hurukuro inoratidza, uye ABC News kutaura zvishoma.
Kukurumidza kuenda kunguva yekunyora iyi Biography, Jake Tapper parizvino ari Chief Washington Munyori we CNN. Ndiye mupi we Mutungamiriri naJake Tapper - vhiki yevhiki terevhizheni yenhau kuratidzwa pa CNN. SaChris Cuomo, Don Lemon, naChristiane Amanpour, Jake Tapper akahwina mibairo yakawanda kwazvo yekugona kuzivisa hunyanzvi. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Jake Tapper Hukama Hupenyu; Musikana / mukadzi uye Vana:
Tapper asati asvitswa zvakakwana mukuremekedzwa kweMukurumbira, akawana mukana wekuyambuka nemusikana wake akatendeuka mugore ra2004. Tapper akasangana nemusikana wake, Jennifer Marie Brown kuLowa Caucus uye akafunga kuvaka hukama hwerudo hwakakomba naye mushure.
Vanenge makore maviri ekufambidzana vakaona shiri dzerudo dzichifamba munzira yekufamba sezvavakachata pazuva re3 raGunyana 2006. Muchato wavo wakakomborerwa nevana vaviri vakanaka. Mwanasikana waJake Tapper, Alice Paul Tapper anga achigadzira zvinonakidza pamahedhiyo enhau.
Unoziva here?… Alice akanyorera op-ed yeNew York Times paaive mugiredhi rechishanu. Pashure pacho, akazivisa asingatyi kuti anotarisira kugadzira chitsva Musikana Scout bheji. Nekudaro, achifunga nezve kukura kwake mukurumbira, kwete ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve mukoma wake mudiki panguva yekunyora iyi bio.
Jake Tapper Hupenyu Hwemhuri Chokwadi:
Mutori wedu wenhau weAmerica uye cartoonist akaita zvakawanda zvehupenyu hwakazadzikiswa, zvese nekuda kwekutsigirwa kwemhuri yake. Pazasi pane ruzivo rwakadzama nezve nhengo yega yega yeJake Tapper's Kaya.
Nezve amai vaJake Tapper:
Amai vaJake Tapper ndiHelen Anne Palmatier Tapper. Kudzoka mumazuva, Helen akashanda semukoti wepfungwa paVeterans Affairs Medical Center muPhiladelphia. Aive achibva kumhuri yekwaMberengwa vasati varoora baba vaTapper. Nekudaro, mushure memuchato wake, akatendeukira kuchiJudea mune iyo denho yekuchengetedza. Naizvozvo, Helen akarerera vana vake mutsika nemagariro echiJudha.
Nezve baba vaJake Tapper:
Kungofanana naamai vake, baba vaJake Tapper, Theodore S. Tapper zvakare vashandi vekurapa. Akashanda semubatanidzwa wepurofesa wevadzidzi paJefferson Medical College muPhiladelphia. Iwe unogona kunge uchinetseka nezve kusabatana kuripo pakati pehunyanzvi hwaTapper nevabereki vake. Chokwadi ndechekuti, Theodore anga agara akatsigira zviroto zvemwana wake zvisinei nekuti zvingave zvisingaenderane nekwaanobva pabasa rake chairo.
About Jake Tapper's Vakoma:
Mazuva evana veTapper angadai asina kunyatsonaka uye anonakidza pasina kuvapo kwemunin'ina wake, Aaron Hahn Tapper. Kudanana kwavo mumwe nemumwe kunowedzera kupfuura miganhu yekutsanangurwa kwevanhu. Sezvineiwo, muchato waTapper wakaitwa nemukadzi waAaron, Rabi Laurie Hahn Tapper.
About Jake Tapper Mhuri:
Vanababa nanamai nasekuru vaJake Tapper vaive Everett Dyson Palmatier naHelen Elizabeth McDowell. Kune rimwe divi, vanasekuru nasekuru vake vaive Abraham “Abe” O. Tapper naJanet Scher. Nekufamba kwenguva, Jake Tappers kashoma kuwana ma tweets nezve babamunini nababamunini. Nekudaro, haasati aratidza kufarira kutaura nezve babamunini nanamainini vake.
Jake Tapper Yemunhu Hupenyu Chokwadi:
Munguva yemubvunzo uye mhinduro chikamu nevateveri vake, Jake Tapper akaburitsa pachena kuti anogara achiwana mukadzi wake nevana pese paanenge asiri kushanda. Achitaura nezvezvaanofarira uye zvekuseredza, Tapper akaburitsa pachena kuti anoda kutora kufamba nembwa yake.
Unoziva here?… Mutori venhau vekuAmerican munyori ndomusanganiswa wePisces zodiac maitiro. Iwe haungazvitendi kana ndikakuudza kuti kunze kwenyika yemukurumbira, Tapper anotyaira kuenda kunze kunodya uye kutamba Legos. Chimwe chinhu chinonakidza cheMunhu nezveTapper ndechekuti mukurumbira wake ndiLauren Bacall.
Jake Tapper Mararamiro Echokwadi:
Sezvineiwo, kushanda nesimba kwaTapper muunyori, kutakura katuni, uye kudhinda kwezvibodzwa kwakaburitsa matani ezvemari. Panguva yekunyora kwake Hupenyu hweNyaya, Tappers Net Worth inofungidzirwa kuve yakawedzera mari inosvika pamamirioni gumi.
Mutengesi wedu akapfuma CNN akakwanisa kurarama hupenyu hwoumbozha, nekuda kwemabasa ake akawandisa emari. Iye anogara mune imwe imba yakanaka uye ane mota dzakawanda dzinopenga.
Mugore ra 2017, Jake Tapper akaburitsa imwe imba yake iri muWashington DC iyo mari inosvika mamirioni mazana masere emadhora. Pakutanga, akange atenga imba iyi muna 1.4 pamadhora zana nemakumi maviri nemashanu emadhora.
Jake Tapper Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Jake Tapper yehupenyu Hupenyu, heano zvimwe zvishoma-kuzivikanwa chokwadi nezvake zvingakubatsira iwe kuti unzwisise Biography yake zvizere.
Chokwadi # 1: Ichokwadi nezve Jake Tapper Chitendero:
Unoziva here?… Jake Tapper munhu wechiJudha. Kuzvarwa mumhuri inotevedzera chiJuda ndicho chikonzero chakanyanya kusara kwekutenda kusingazungunike. Asati aberekwa, amai vake vaive muKristu vakatendeukira kuchiJudha vasati varoora baba vake.
Chokwadi # 2: Tapper Unquestionable Author:
Kunyangwe iye ane mukurumbira wekubatanidza The lead naJake Tapper paCNN, Tapper zvakare munyori akanaka. Sezvineiwo, imwe yemabhuku ake, Iyo Hellfire Club akaita kuti ive kuNew York Times Best-Vatengesi Rugadziriso muna 2018. Neraki, imwe yemabhuku ake, Iyo Kunze, yakava zvigadziko zvekugadzirwa kweiyo firimu - Iyo Outpost.
Jake Tapper Wiki:
Pazasi pane wiki zivobase yemunyori weAmerica uye mutori venhau. Itafura ichakubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi
Zita rizere: Jacob Paul Tapper
Nick Zita: Jake Tapper
Zuva rekuzvarwa: 12th March 1969
Nzvimbo yekuzvarirwa: New York City
Baba: Theodore S. Tapper
Amai: Helen Anne Palmatier Tapper
Sibling: Aaron Hahn Tapper (mukoma)
Muroora (s): Jennifer Marie Brown
Muhoro: $ 4 Million
kukwirira: 1.85m - Mumamita
6 ′ 1 ″ - Mumakumbo
Hobbies: achifamba nembwa yake
Tinokutendai nekuverenga yedu Jake Tapper Biography. Uyezve, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paJake Tapper Biography uye Nyaya Yevechidiki, vatariri vedu vakaedza kuchengetedza kurongeka uye kutonga zvinhu. Nekudaro, nenyasha isa zvaunofunga kana kuti tibvunze kana ukaona chimwe chinhu chisiri kutaridzika pane chinyorwa ichi.
Mufananidzo Unopa: CNN's Jake Tapper @ SXSW 2017 by neworeden ine mvumo pasi pe kusika commons CC BY-SA 2.0.
Yakagadziridzwa zuva: Nyamavhuvhu 21, 2020